कलेज पढ्दापढ्दै कसरी सुरु गर्ने सेयर लगानी ? भविष्यमा राम्रै हुन सक्छ है लाभ – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार १०:४४ Basanta Khanal	0 Comments	share lagani
काठमाडौं : यदि तपाईं कलेज विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने लगानी सम्बन्धी विषय तपाईंको मस्तिष्कमा आउने आउन सक्छ । कतिपयलाई त लगानी सम्बन्धी सोच आउँदै नआउन पनि सक्छ । धेरैले कलेज जीवन भन्ने बित्तिकै एक किसिमको स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्ने गर्दछन् । किशोरावस्थाको अन्तिम सयम हुने भएकाले धेरैले पढाईंसँगै मनोरञ्जन र जीवनका नयाँ आयामहरु अन्वेषण गर्ने समयका रुपमा कलेजलाई लिने गर्दर्छन् । कलेज पढ्दा पढ्दै लगानीका बारेमा सोच्ने र ? भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ ।तर, भविष्यको जग बसाउन कलेज जीवन नै अधिक महत्वपूर्ण हुन्छ । तसर्थ, किशोर अवस्थामै लगानी गर्ने विषयमा पनि सोच बनाउन जरुरी हुन जान्छ । साथै, १८ वर्षको उमेर पुग्दै लगानीमा प्रवेश गर्नुका अनगिन्ती फाइदाहरु पनि छन् । जतिसक्दो चाँडो लगानीको क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो त्यति नै लाभदायी मानिन्छ । प्रख्यात लगानीकर्ता वारेन बफेटले पनि ११ वर्षको उमेरमै सेयर लगानी सुरु गरेका थिए ।
कलेजबाटै लगानी सुरु गर्नुको फाइदा
कलेजबाटै लगानी सुरु गर्नुका धेरै फाइदाहरु छन् । नेपालमा अधिकांश विद्यार्थीले माध्यमिक तहको पढाई सकेर १७–१८ वर्षकै उमेरमा कलेज अध्ययन सुरु गर्ने गरेका छन् । सोही उमेरमा कलेजसँगै लगानी पनि सुरु गर्न सकियो भने लामो समयसम्म लगानीको क्षेत्रमा रहन पर्याप्त समय मिल्दछ । यसले सानो उमेरमै सम्पति निर्माण गर्ने अवसर पनि दिलाउँछ । नेपालमा पनि अन्य देशहरुमा जस्तो पढाई सक्दा ऋणको भारी बोक्नुपर्ने अवस्था छैन । नेपालमा अधिकांश विद्यार्थीको पढाई खर्च आफ्ना बाबुआमाले नै व्यहोर्ने गर्दछन् । यो क्रम पहिलो पटक स्कूल भर्ना भएदेखि अधिकांशको स्नातक तहको पढाई नसकिँदासम्म चलिरहन्छ । उच्च माध्यमिक तह अथवा कलेज सुरु गरेदेखि स्नातक तहसम्मको पढाईलाई हिसाब गर्ने हो भने कुल ६ वर्षको समय बित्दछ ।यो ६ वर्ष पढाईसँगै विद्यार्थीले आफ्नो क्षमता अनुसार सानो सानो लगानी गर्दै जाने हो भने अवश्य पनि फाइदा हुने देखिन्छ । यसको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको कलेजमा पढेको विषयलाई तत्काल व्यवहारमा उतार्ने अवसर पनि मिल्दछ । अर्को फाइदा, जोखिम वहन गर्नसक्ने क्षमतासँग सम्बन्धित छ । सानो उमेरमै लगानी सुरु गर्दा गल्ती तथा जोखिम भए पनि भविष्यमा सुधार गर्ने पर्याप्त समय हुन्छ ।
जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता विकास हुन्छ । जसले भविष्यमा आर्थिक मामिलामा पनि चाँडै परिपक्क बनाउँछ । अर्को महत्वपूर्ण फाइदा कम्पाउन्डिङले दिन्छ । कम्पाउण्डिङलाई विश्वको आठौं आश्चर्य पनि भन्ने गरिन्छ । सानो उमेरबाटै निरन्तर लगानीगर्दा चक्रवृद्धि फाइदा मिल्छ । सुरुवाती लगानीलाई गुणात्मक ढंगले वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसैलाई कम्पाउण्डिङ रिर्टन भनिन्छ । चाँडो लगानी सुरु गर्दा विद्यार्थीलाई आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न मद्दत मिल्छ ।
अपरझट आइपर्न सक्ने आर्थिक समस्यालाई हल गर्न कलेजमा गरिएको लगानी निकै उपयोगी हुन सक्दछ । अन्यबाट सापटी तथा ऋण लिने समस्याबाट पनि बच्न सकिन्छ । वित्तीय अनुशासनका लागि पनि कलेजबाटै लगानी सुरु गर्नु लाभदायी हुन्छ । यसबाट बचत र लगानीको व्यावहारिक भिन्नतालाई बुझ्न पनि सहज हुन्छ । यद्दपि, लगानी पनि अनुशासित भएर गर्नु उत्तिकै जरुरी हुन्छ । जोस र जाँगर धेरै हुँदैमा हौसिएर लगानी गर्नुभने हुँदैन ।
पैसाको जोहो गर्ने :
विद्यार्थी जीवनमा लगानी गर्नका लागि प्रशस्त पैसा हुँदैन । तर यसको मतलब पैसा हुँदै हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन । अभिभावकबाट पनि पैसाको नियमित आपूर्ति भइरहेको हुन्छ । तर पैसा भयो कि खर्च गर्न मन लागिहाल्छ । तर नियमित आपूर्ति हुने पैसाको जोहो गर्न प्रयत्न गर्ने हो भने लगानीका लागि उचित केही पुँजी जम्मा हुन्छ । यस्तो पैसालाई नियमित बचतमा राख्न सकिन्छ । साथै, अन्य लगानीका लागि पनि उपयोगी सावित हुन्छ ।
सेयर बजार :
सानो उमेरदेखि नै लगानी गर्नका लागि सेयर बजार उचित माध्यम हुन्छ । यद्दपि, यसमा जोखिमको सम्भावना पनि रहन्छ । अनुभव र ज्ञानको कमीले दोस्रो बजारमा लगानी जोखिमपूर्ण हुन्छ । तर प्राथमिक बजार वा राम्रो कम्पनीको आइपीओ लगानीलाई भने सुरक्षित मानिन्छ ।हाल नेपालमा सानो रकममा पनि आइपीओ भर्न सकिने व्यवस्था छ । न्यूनतम १ हजार रुपैयाँमै आवेदन दिन पाइने हुनाले विद्यार्थीहरुका लागि लगानी गर्ने बानी बसाउन आइपीओले मद्दत पुर्याउँछ । साथै, दोस्रो बजारमा पनि सावधानीपूर्वक सानो सानो हिस्सामा नियमित लगानी गर्नाले लाभ लिन सकिन्छ ।
कम जोखिम भएका लगानी उपकरण :
प्रत्यक्ष ज्ञान र अनुभवको कमी भएकाले कम जोखिम भएका लगानी उपकरणमा लगानी गर्नु उपयोगी हुन्छ । उदाहरणका लागि म्युचुअल फन्ड, डिबेन्चर लगायतलाई लिन सकिन्छ । यस्ता उपकरणहरु निश्चित समयावधिका हुन्छन् । सेयर बजारमा आफू प्रत्यक्ष लगानी गर्न सकिँदैन भने म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सकिन्छ । लगानी व्यवस्थापकहरुले म्युचुअल फन्डहरुमार्फत अधिकांश लगानी सेयर बजारमा गरेका हुन्छन् ।यी फन्डहरुले उचित मुनाफा गरी वार्षिक प्रतिफल प्रदान गर्दछन् भने फन्ड परिपक्क भइसकेपछि खारेजीमा जाँदा लगानी अनुसारको प्रतिफल पनि पाइन्छ । यस्तै, डिबेन्चर, बन्ड लगायतले पनि पूर्वनिर्धारित वार्षिक ब्याजदर लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराउँछन् । डिबेन्चर तथा म्युचुअल फन्डहरु दोस्रो बजारमा पनि किनबेच हुने भएकाले तत्काल नगदमा परिणत गर्न पनि सहज हुन्छ ।
अध्ययन र अनुसन्धानमा समय दिने :
विद्यार्थीको मुख्य कामनै अध्ययन हो । लगानी व्यवस्थापन पनि जोखिमपूर्ण काम भएकाले अध्ययन र अनुसन्धानमा जोड दिन आवश्यक हुन्छ । अनुभवसँगै ज्ञान पनि बढाउँदा लगानीबाट भरपूर फाइदा लिन सकिन्छ । सेयरमा लगानी गर्नका लागि झन धेरै अध्ययनको आवश्यकता पर्दछ । सेयरका आधारभूत पक्षहरु विश्लेषण गर्नुपर्दछ । यसले भविश्यमा बजारको टे«न्डलाई नै विश्लेषण गर्न सक्ने बनाउने सम्भावना हुन्छ ।
← पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज- ११ बैशाख २०७८ शनिवारको राशिफल पढौं
पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज- १२ बैशाख २०७८ आइतवारको राशिफल पढौं →
यसरी हुँदैछ नेपाली क्रिकेटरको अभ्यास
२८ माघ २०७७, बुधबार २३:१४ Basanta Khanal	0